မင်္ဂလာဆက်ဆံရေးစိတ်ဖိစီးမှုစီမံခန့်ခွဲကူညီဖို့ | ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချ
ပင်မစာမျက်နှာ ကျန်းမာရေး စိတ်ဖိစီးမှု
စိတ်ဖိစီးမှုများနေတဲ့အမြန်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အဘို့, ဒီစောင့်ကြည့် ဗီဒီယို.
acute စိတ်ဖိစီးမှုကျွန်တော်တို့ကိုတိုတောင်းသောသက်တမ်းခြိမ်းခြောက်မှုများသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အပြောင်းအလဲများကိုတုံ့ပြန်ကူညီပေးသည်သောခန္ဓာကိုယ်မှသဘာဝသတိပေးအချက်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအဓိကရှင်သန်မှုယန္တရားဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှုကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပျံသန်းသို့မဟုတ်ရန်ပွဲအဖြစ်လုပ်ဆောင်ချက်အတွက်မျှော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းအင်စုစညျး။ (အရိပ်မိထိခိုက်မှုကိုရှောင်ရှားမကြာခဏတိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်ပိုမိုနှစ်သက်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်) ကြောက်စိတ် (arousal), လေယာဉ်ခရီးစဉ်;: ဒါဟာလေးတုံ့ပြန်မှုသို့ပြိုပျက်နိုင်ပါတယ် ရန်ပွဲ (ထိုအန္တရာယ်မှတက် facing) နှင့်အေးခဲ (အသေကောင်ကစားခြင်းနှင့်ဝံ / ခြိမ်းခြောက်မှုအပေါ်လှုံ့ဆျောမျှော်လင့်) ။ ဤရွေ့ကားအဆင့်ဆင့်လည်းနေ့တိုင်းဖိအားလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
ကျနော်တို့ကျန်းမာသောအခါ, ကျွန်တော်တစ်ဦးဘတ်စ်ကားဖမ်းရန်အပြေးဥပမာ, တိုတောင်းသောသက်တမ်းသို့မဟုတ်စူးရှသောကဖိစီးမှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်စွမ်းအင်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးခုန်နှုန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးသကြားဓာတ်အဆင့်ကိုကျနော်တို့ run အဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်အအေးကူညီဖို့, ငါတို့ချွေးတိုးပြောင်းလဲထတတ်၏။ ဤရွေ့ကားတုံ့ပြန်မှုအားလုံးစိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းများကအစပျိုးနေကြတယ်, adrenaline နှင့် cortisol။ ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကျနော်တို့ကဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်မှမရယူမီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘတ်စ်ကားကိုမြင်လျှင်အသုံးပြုပုံပြော, နှိုးဆော်ခြင်းကြသောအခါ, ငါတို့အချိန်ရှိရဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုစည်းရုံးကူညီရန်မိနစ်အနည်းငယ်အဘို့ (အမေရိကန်အသုံးအနှုန်းများ epinephrine နှင့် norepinephrine ဖြစ်ကြသည်) adrenaline နှင့် noradrenaline ထုတ်လုပ်ရန်။ စိတ်ဖိစီးမှု (whew! ကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်း) ကျော်ဖြစ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လျင်မြန်စွာပြန်လည်သက်သာ, ချိန်ခွင်လျှာပွနျလညျထူထောငျဖြစ်ပါတယ်။
ယင်းဖိအားဆက်လက်လျှင်, ဆက်လက်စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့လုံလောက်တဲ့ကြာကြာမြင့်သောစွမ်းအင်အဆင့်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်တက်ထို့နောက် neurochemical cortisol မီးလောင်မှုဥပမာ, ကျနော်တို့ဘတ်စ်ကားလက်လွတ်နှင့်အရေးပါသောအစည်းအဝေးသို့မဟုတ်နေ့စွဲအဘို့အနှောင်းပိုင်းတွင်ဖြစ်ခြင်း၏စိုးရိမ်ရေမှတ်၌ရှိကြ၏။ cortisol '' ရန်ပွဲ '' ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီသို့မဟုတ် 'မပြေး' 'ဖို့အသည်းထဲမှာသိမ်းထားတဲ့သိုက်နှင့်ကြွက်သားကနေစွမ်းအင်ကိုစုစညျး။ အဆိုပါနှောင့်ရှက်ဖိအားလွန်ပြီပြီးနောက်က system ကိုကောင်းစွာသို့ချပေးထားနိုင်သည်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့စိတ်ဖိစီးမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာ၌အစပျိုးလိုက်ခြင်းအများအပြားရှိသည်ဆိုပါက cortisol ကျွန်တော်တို့ရဲ့ system ကိုရေလွှမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ယနေ့ဖိအားလူမှုရေးအနေအထား, မိသားစုရန်ငြိုးထားခြင်း, စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုသို့မဟုတ်အထီးကျန်ထက်ထိုကဲ့သို့သောမျိုးနွယ်စုသို့မဟုတ်ဖုံးကိုဓားရှည်-သွားကျားစစ်မက်အဖြစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခြိမ်းခြောက်မှုအကြောင်းကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေးဘိုးဘေးဘီဘင် '' အလောင်းတွေသူတို့အားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခြိမ်းခြောက်မှုပြုကဲ့သို့တူညီသောလမ်းအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခြိမ်းခြောက်မှုများတုံ့ပြန်မှု။
မှ / porn sites များအပေါ်တုန်လှုပ်ဖွယ်ပုံရိပ်တွေအချို့အဆင့်ဆင့်မှ desensitised အသုံးပြုသောဖြစ်လာလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်သူတို့တစ်တွေမြင့်မားတဲ့ရဖို့ပိုပြီး arousal ပိုပြီးတုန်လှုပ်ဖွယ်ပုံရိပ်တွေလိုအပ်ပါတယ်။ စိုးရိမ်စိတ် dopamine တစ်ပိုကြီးမြင့်တက်ကပါဝင်ပတ်သက်ရသောလိင်စိတ်နိုးထတိုးပွားစေပါသည်။ စနစ်အတွက် cortisol ၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းစိတ်ဖိစီးမှု, ဒါပေမယ့်လည်းစိတ်ကျရောဂါမသာတစ်ဇီဝအမှတ်အသားရှိပါသည်။
စိတ်ဖိစီးမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့သတိအသိအမြင်ကိုအောက်တွင်စုပြုံနိုင်ပါတယ်။ ရုတ်တရက်ကျွန်တော်ဘဝခံစားနေရနှင့်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်နိုင်ခြင်းခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ပဋိပက္ခသို့မဟုတ်ပြဿနာမျှခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ တစ်ဦးကအလေးပေးဦးနှောက်အလေ့အထပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကို Creative စဉ်းစားတွေးခေါ်ခက်လွန်းဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်အကျွံစိတ်ဖိစီးမှု, ရှည်လျားလွန်းသည်, နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်လာသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကစူးရှသောကဖိစီးမှုနှင့်အတူမအဖြစ်ကိုတဖန်ကိုယ်တိုင်က restore နိုင်မဟုတျပါဘူးသောအခါဤဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုနှိမ့်ချကျီဘာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကလြှော့ပေါ့, မတော်တဆမှုဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးအားနည်းချက်ကို, စိတ်ဓာတ်စိုးရိမ်ပူပန်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုများထဲက feeling ကျွန်တော်တို့ကိုရွက်။ ကျနော်တို့ကပိုသည်အခြားစိတ်ကြွဆေး, မူးယစ်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်အရက်ကိုယူပြီးအားနည်းချက်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုကောင်းခံစားရနှင့်နာကျင်မှုမှရှောင်ရှားစေရန်ပိုပြီးအစွန်းရောက်အင်တာနက်ဆွအခါဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုနာတာရှည်အသုံးပြုခြင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၏သိုလှောင်ထားသောစွမ်းအင်ကိုကြီးမားသောဖိစီးမှုဖြစ်စေပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေသည်။ Hypersexual Disorder နှင့်အတူအမျိုးသားများအတွက် HPA ဝင်ရိုးတန်း Dysregulation (2015) - အမျိုးသားလိင်စွဲလမ်းသူ (၆၇) ဦး နှင့်အသက်အရွယ်အလိုက်ထိန်းချုပ်မှု (၃၉) ခုပါ ၀ င်သည့်လေ့လာမှုတစ်ခု။ Hypothalamus-Pituitary-Adrenal (HPA) ဝင်ရိုးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုတွင်အဓိကကစားသမားဖြစ်သည်။ စွဲ ဦးနှောက်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုဆားကစ်ပြောင်းလဲ အလုပ်မဖြစ်တဲ့ HPA ဝင်ရိုးမှဦးဆောင်။ လိင်စွဲ (hypersexuals) ပေါ်မှာဤလေ့လာမှုပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းနှင့်အတူတွေ့ရှိချက် mirror ကြောင်းပြောင်းလဲစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနှစ်ပေါင်းများစွာဖိစီးစီမံခန့်ခွဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သာယာဝပြောရေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးမှသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်အရာမှမြင်ရပါတယ်အဖြစ် Grant ကလေ့လာမှု, စွဲလမ်း, စိတ်ကျရောဂါနှင့်ထဲတွင် Neurosis ကျန်းမာ, ပျော်ရွှင်ဆက်ဆံရေးအကြီးမားဆုံးအတားအဆီးဖြစ်ကြသည်။
စိတ်ဖိစီးမှုဟာရိပ်မိစိုးရိမ်ရေမှတ်ထဲကကျွန်တော်တို့ကိုရဖို့ချက်ချင်းစွမ်းအင်လိုအပ်သောသူတို့ကိုဒေသများသို့စွမ်းအင်အစာကျွေးနိုင်ရန်အတွက်ဦးနှောက်, အစာခြေစနစ်နှင့်မျိုးဆက်ပွားအင်္ဂါနဲ့တူအဓိကဒေသများမှအာရုံနှင့်စွမ်းအင်ထောက်ပံ့ရေး၏ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အာရုံစိုက်ပြောင်းရွှေ့ရသည်။ ကျနော်တို့စနစ်တကျကျနော်တို့ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုစီမံခန့်ခွဲခြင်း, စိတ်ဖိစီးမှုမလွှဲမရှောင်ဖြစ်ပါသည်မဟုတ်လျှင်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, ငါတို့သည်စိတ်တိုအူသိမ်အူမ syndrome ရောဂါ, ဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲသား memory နဲ့အကြာကြီးအာရုံစူးစိုက်ရန်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့်တူအစာခြေအခြေအနေများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုခံအားစနစ်အားနည်းကျနော်တို့ပိုမိုလွယ်ကူစွာရောဂါကူးစက်မှုကိုဖမ်းခြင်းနှင့်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေကြာကြာယူပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုအသက်အရွယ်အရေပြားနှင့်ခန္ဓာကိုယ်။
နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုလက်အောက်တွင် adrenaline သင်ယူမှတ်မိဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုဒုက္ခိတကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးတိုက်ခိုက်မှုသို့မဟုတ်လေဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုသွေးကြော, နဲ့ Cortisol ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက်အမာရွတ်များအဆိုပါ hippocampus ၏ဆဲလ်တွေဖန်တီးပေးပါတယ်။
တစ်ဦးချင်း, စိတ်ဖိစီးမှုများအဆိုးဆုံးမျိုးကျနော်တို့အကူအညီမဲ့ဖြစ်ကြောင်း, ကျနော်တို့ပြဿနာကျော်မျှထိန်းချုပ်မှုရှိသည်သောခံစားချက်ဖြစ်ပါတယ်။
<< ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု တစ် ဦး က Supernormal လှုံ့ဆော်မှု >>